ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ (၁၅. ၅. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(ခ)-ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိကန်ပိုင်တီနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းရုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပိုပေးနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ယာဉ်ကြီးရပ်နားစခန်း၊ကုန်သိုလှောင်ရုံများ၊ကတ္တားများ၊စစ်ဆေးကိရိယာ(X-Ray)စသည်တို့ကိုတိုးမြှင့်တည်ဆောက်ရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွ
(ဃ)-ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ အပေါက်ဝကျေးရွာ ကမ်းပြိုမှုအန္တရာယ်အား တားဆီးကာကွယ်ရန် ထိရောက် သည့် နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
(င)-ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး၏ တစ်ချို့လမ်းများတွင် လူသွားစြင်္ကံ၌ တည်ဆောက်ထားသော ဆက်သွယ်ရေးပုံးများကို ပြောင်းရွှေ့ပေးရန်နှင်‌့ ရှုပ်ထွေးနေသော ဆက်သွယ်ရေးကြိုးများ၊ ယိုင်လဲနေသော တိုင်များကို ပြုပြင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွ
(စ)-ထီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဂန့်ဂေါ-ရေမျက်နီ-ပုလဲ ပဆငလမ်းနှင့် ကျောချောင်း-မျက်မြောင်သို့ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းပေါ်ရှိ စစ်ရှီးချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား (၁၄ x ၈၀) ပေအား ကျေးရွာ လမ်းကူးတံတားအဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် Cyclone Shelter များ၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Speed Boat တစ်စီး၊စားနပ်ရိက္ခာများပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဝန်တင်လှေနှစ်စီးနှင့် မြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းရေးကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအား ခွင့်ပြုပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်